ISEBOX: Ukushicilelwa Nokuqukethwe Kwevidiyo | Martech Zone
I-ISEBOX: Ukushicilelwa Nokuqukethwe Kwevidiyo
ULwesine, May 29, 2014 Douglas Karr
ISEBOX ivumela ama-ejensi nemikhiqizo ukukhahlela, ukushicilela nokusabalalisa izithombe, amadokhumenti, amafayela alalelwayo, amakhodi okushumeka, nokuningi konke kufayela le- ikhasi elilodwa. Ikhasi lapho uya khona lingavikelwa ngephasiwedi noma livulekele umphakathi. Amafayela evidiyo alayishiwe angalingana no-5GB ngefayela ngalinye futhi imidiya iyadlalwa iklayenti noma i-HQ kunoma iyiphi ideskithophu noma idivayisi yeselula ngaphandle kokudinga ukulanda, isidlali, ukungena ngemvume kwe-FTP, njll.
Amaklayenti e-ISEBOX asebenzisa ipulatifomu enekhasi elilodwa ekusakazeni ukuhamba komsebenzi kwamavidiyo, ukukhishwa komphakathi kwe-multimedia, i-toolkit yomkhiqizo, imibiko yokusabalala kwabezindaba futhi njengethuluzi lokwabelana ngempahla langaphakathi noma umtapo wolwazi wokuqukethwe.
Izici ezibalulekile ze-ISEBOX zokuqukethwe nokushicilela zifaka phakathi:
Konke okuqukethwe, indawo eyodwa - Faka izithombe, ividiyo, umsindo nemibhalo yanoma iluphi uhlobo ku-ISEBOX bese wabelana ngayo nethimba lakho, amaklayenti, izintatheli nabezindaba. Konke kungabukwa futhi kulandwe endaweni efanayo. I-URL eyodwa iletha konke endaweni eyodwa.
Ukusatshalaliswa nokwabelana ngevidiyo kwe-HD - Sabalalisa amafayela evidiyo aze afike kukhwalithi ye-HD - amaphakheji ahleliwe noma okuqukethwe kwe-b-roll. Amafayela wakho wevidiyo agcwele azolandwa, kanye namafomethi we-MP4 ne-FLV wokulungiswa okuzenzakalelayo Akusekho ukuguqula nokufaka izingqinamba zokudlala.
Ukulayishwa Kwefayela Elikhulu - Usebenzisa Isilayishi Esikhulu Sokwakheka Kwefayela le-ISEBOX, layisha futhi wabelane ngamafayela awodwa aze afike ku-5GB ngosayizi ngaphandle kokuphambanisa ne-FTP nokungena ngemvume okuyinkimbinkimbi. Awukwazi ukwenza lokho nge-imeyili, i-WeTransfer noma i-YouSendIt. Futhi ungalayisha amafayela amaningi ngendlela othanda ngayo.
Landa futhi Shumeka Ukulandelela - I-ISEBOX ilandelela kahle ukuthi ubani olanda okuqukethwe kwakho - enikeza amagama abo, i-imeyili, umqashi, isihloko, nokuningi - konke kumbiko ococekile kudeshibhodi yakho. I-ISEBOX izophinda ikutshele ukuthi iyiphi ividiyo efakiwe, nokuthi isebenza kanjani.
Imibiko Nezibalo - Kala ukusebenza kahle ngemibiko ye-ISEBOX ne-Analytics. Yazi ukuthi kungaki okulandwayo nokuthi kubani, ukubukwa kwamakhasi, ukubhekiswa kwezimoto, okuqukethwe okuthandwa kakhulu, kanye nomthelela wezokuxhumana (amasheya, ukuthandwa, amaTweets, njll.). Okwethu analytics Injini izokunikeza imininingwane eminingi kune-Google - ungumnikazi wedatha, hhayi yona. Uma ufuna ukufaka i-ID yakho ye-Google Analytics kabili, ungakwenza lokho futhi.
Ideshibhodi yokubambisana ikuvumela wena nethimba lakho ukuthi nisebenzisane, ngamazinga ahlukahlukene emvume, kokuqukethwe nemibiko. Uma usebenza namakhasimende, ungabanikeza ideshibhodi yabo futhi, okuvumela ukuthi usebenze kubo bonke.
Hambayo - Konke kuhlelwe ku-HTML5 ukuqinisekisa ukuhambisana nawo wonke amadivayisi eselula - i-Android, i-iPhone, i-iPad, i-Blackberry, nokuningi. Wonke amavidiyo, izithombe, umsindo, kanye nemibhalo kuyabukeka kungakhathaleki ukuthi yini oyilayishayo, nokuthi isiphi isisetshenziswa noma isiphequluli esisetshenziswayo
Ukwenza Ngokwezifiso Ngokugcwele Komkhiqizo - Amakhasi wokuqukethwe we-ISEBOX angafakwa uphawu kumkhiqizo wakho, noma kumakhasimende akho uma uyi-ejensi. Konke kusuka ekukhethweni kwamafonti amaningi, ilogo, imibala ye-RGB / Hex, isithombe sangemuva nokuningi.
Ukusatshalaliswa Kwe-imeyili - Layisha uhlu lwakho lokusabalalisa ku-ISEBOX, bese uhlela noma uthumele i-ISEBOX Mailout. Le nguqulo enobungani be-imeyili yekhasi elifanayo lokuqukethwe le-ISEBOX elingagcini kumafolda ogaxekile, elimakwa njenge-imeyili engenamsebenzi, noma uvale amabhokisi okungenayo ngokunamathiselwe okusindayo. Izodlala nevidiyo ngqo ku-imeyili uma isekelwa.
Iphasiwedi ivikelwe - Awulungele umhlaba ukuthi ubone okuqukethwe? Ngokuchofoza iphasiwedi eyodwa vikela noma yiliphi ikhasi le-ISEBOX nokuqukethwe kwalo. Iphelele ngokukhethekile kwabezindaba / intatheli, ukuxhumana kwangaphakathi okulula, noma izinqubo zokugunyazwa kwamakhasimende.
Izilimi Eziningi - Shicilela amakhasi wakho wokuqukethwe we-ISEBOX ngolunye lwezilimi eziningi kufaka phakathi: isiNgisi, isiFulentshi, iSpanishi, isiJalimane, isiNtaliyane, isiShayina, isiPutukezi, nesiCzech ngezilimi eziningi ezingezwe ezinyangeni ezizayo.
Imidiya Yezokuxhumana Iyahambisana - i-frontend yakhelwe ukusebenza futhi ibukeke ibushelelezi njengamapulatifomu omphakathi esiwasebenzisa nsuku zonke. I-ISEBOX ikunikeza nenketho yokunika amandla ukungena ngemvume kokuchofoza okukodwa kokuxhumana komsebenzisi kubasebenzisi ukulanda okuqukethwe. Izixhumanisi ezilula zokwabelana ngomphakathi zifafazwa kulo lonke i-ISEBOX, nazo.
Tags: imeyiliukushicilela umcimbiiseboxUkumakethwa Kwamaselula NethebulethiSocial Media Marketing
I-Postacumen: Ukuhlaziywa Kokuncintisana Kwamakhasi e-Facebook
Ukumaketha Kwamaselula: Kwenze kube ngokwakho